တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2017) တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2017) တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၅
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2017) တက်ရောက်ရန်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ရေတပ်စစ်သံမှူးနှင့်လေတပ်စစ်သံမှူး၊ တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါ သွားကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Ponpipaat Benyasri နှင့်ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အာဆီယံနိုငျငံမြား၏ ကာကှယျရေးနှငျ့ လုံခွုံရေး ဆိုငျရာပွပှဲ (Defence & Security 2017) တကျရောကျရနျထှကျခှာ
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ – ၅
ထိုငျးနိုငျငံတှငျကငျြးပပွုလုပျမညျ့ အာဆီယံနိုငျငံမြား၏ ကာကှယျရေးနှငျ့လုံခွုံရေး ဆိုငျရာပွပှဲ (Defence & Security 2017) တကျရောကျရနျအတှကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ရနျကုနျအပွညျပွညျ ဆိုငျရာ လဆေိပျမှ ထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစား လှယျအဖှဲ့အား ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျ၊ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ သကျပုံနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံသံ အမတျကွီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long၊ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော ရတေပျစဈသံမှူးနှငျ့လတေပျစဈသံမှူး၊ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့တှငျ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးညိုစောနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလိုကျပါ သှားကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့ရှိ သုဝဏ်ဏဘူမိ လဆေိပျသို့ ရောကျရှိကွရာ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောပူးတှဲ စဈဦးစီးခြုပျ Gen. Ponpipaat Benyasri နှငျ့ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးမွငျ့သနျး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျောနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွပါသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် One Hero’s Dream ပြိုင်ပွဲတွင် ထိုက်တန်စွာ အနိုင်ရအောင်မြင်ခဲ့သည့် အောင်လအန်ဆန်အား ဂုဏ်ပြုစာလွှာ ပေးအပ်
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အရေးပါသော အောင်မြင်မှုများနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်
နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇ Admin 0